Fiidiyowyo lagu taliyay - Hay'adda Abaalmarinta - Jacaylka, Jinsiga & Internetka
Bogga ugu weyn Resources Fikradaha lagu taliyay
Fiidiyowyada waa hab deg-deg ah oo lagu heli karo sayniska aasaasiga ah ee ku saabsan waxyeelada soo noqoshada sawirrada internetka.
Waa kuwan qaar aan kugula talineyno. Iyagu kuma jiraan wax filimo ah.
Mary Sharpe waxay soo bandhigaysaa shaqada Hay'adda Reward Foundation Saameyntii Pornography oo Internet ah oo ku saabsan bulshada (wakhtiga orodka 2: 12)
Sannadkii 2016 xubnihii ka socday The Reward Foundation ayaa ka hadlay Shirweynihii 3aad ee Caalamiga ah ee Balwadda Tiknolojiyadda ee lagu qabtay magaalada Istanbul, Turkiga. Darryl Mead ayaa ka hadlay Khatarta ay dhalinyaradu wajahayaan marka ay noqdaan kuwa adeegsanaya dukaamada (waqtiga socda 12.07). Mary Sharpe ayaa eegay Istaraatiijiyooyinka looga hortago isticmaalka maandooriyaha internetka (wakhtiga orodka 19.47). Sarkaalkeena Sare ee Cilmi-baarista, Gary Wilson, ayaa ka hadlay Kicinta isticmaalka suufka internetka ee casriga ah ayaa muujinaya saameyntiisa (wakhtiga orodka 17.24).
Khabiirka cilmu-nafsiga ee Jaamacadda Stanford Philip Zimbardo wuxuu saameyn weyn ku yeeshay ka fekerka saamaynta taas oo wiilasha ka dhigaysa kuwo aan ku guuleysan iskuulka. Gudaha 'Diidmada GuysWuxuu weydiiyaa sababta waxqabadka wiilasha uu ugu muuqdo inuu hoos ugu sii dhacayo adduunka casriga ah (waqtiga socda 4:43).
Imtixaanka Porn Porn
2012 Gary Wilson wuxuu kajawaabay Philip Zimbardo tartankiisii ​​'The Great Porn Experiment'. Waxay dejineysaa caddaynta isticmaalka culus ee filimada internetka sida mid ka mid ah sababaha suurtagalka ah ee hoos u dhaca guud ee waxqabadka wiilasha. 'The Great Porn Experiment' ayaa hadda laga daawaday YouTube-ka in ka badan 13.7 milyan oo jeer waxaana lagu turjumay 18 luqadood (waqtiga socda 16:28).
Maskaxdaada on Porn: Sidee internet Porn wuxuu saameynayaa Maskaxda
Bandhigga video 2015 waa a update iyo kordhinta hadalka asalka ah ee TEDx ee Gary Wilson (waqtiga socda: 1 saac 10 daqiiqo).
Porn-Caused Cillad Erectile
As Qalal-xumaada qaloocsan ee xummadda waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu murugsan ee ragga iyo dumarka, waxaa habboon in daawashada bandhigtan laga bilaabo 2014 si ay u fahmaan waxa dhacaya maskaxda iyo xubnaha taranka markaanu ku fooganayno waxyaabo badan oo aad u kicinaya. Waa la daaweyn karaa kiisaska intooda badan bilaha badan marka qofku ka tago porno oo u ogolaado maskaxda soo kabashada (waqtiga saacadaha: 55: 37).
Sayniska Cilmiga Filimada
asapSCIENCE waxay abuurtay sheekadan runtii la heli karo. ''Sayniska Cilmiga Filimada'waa soo koobitaan cad oo ku saabsan sida iyo sababta sawir-gacmeedku u noqon karo mid la qabatimo (waqtiga socda 3: 07).
Cabbiraadda Saamaynta sawirada
Gary Wilson wuxuu naga qaadaa habka naqshad-cilmiyeedka cilmi-baarista liidata ay soo saari karto natiijooyin aan fiicneyn oo ku saabsan saamaynta caafimaadka ee isticmaalka sigaarka internetka (wakhtiga la socdo 6: 54).
Maskaxda Dhallinyaradu waxay la kulmeysaa Porn-ka Internet-ka ah
Haddii aad xiiseyneyso astaamaha gaarka ah ee maskaxda qofka dhalinyarada ah laga bilaabo c 12 sano-25 sano iyo saameynta sawir-gacmeedka internetka ee maskaxdaas xasaasiga ah, daawo bandhigiddan (saacadaha la socdo: daqiiqo 33).
Weydii Nuururururin ku saabsan Saamaynta Internet Porn on Maskaxda
Tani si qoto dheer Wareysiga TV-ga oo leh neurosurreon Dr. Donald Hilton waa qiimeyn daawashada (wakhtiga ku shaqeynaya: 22: 20).
Hadal weyn oo TEDx ah oo eegaya sayniska aasaasiga ah ee balwadda maandooriyaha waa Douglas Lisle's 'Tilmaamaha Diidmada'(Waqtiga orodka 17:10).
Farqiga u dhexeeya raaxeysiga iyo farxadda
Fiidiyowgaan oo ay soo saartay Jaamacadda California ee TV-ga loo yaqaan "Hacking of American Mind“, Neuro-endocrinologist Robert H Lustig ayaa sharxaya si fudud marka loo eego farqiga u dhexeeya raaxada iyo farxadda oo ah shaqo dopamine iyo serotonin maskaxda ku jirta. Waxay eegaysaa nolol maalmeedka iyo waxyaabaha riixitaanka iyo jiidaha ee saameynaya mudnaantayada wanaag ama xumaanba. Wuxuu soo koobayaa buugiisa cusub ee "The Hacking of the American Mind: The Science Behind the Corporate La wareegga Maskaxdeena iyo Jirkeenna. (Waqtiga orodka: 32:42).
Koob shaah ah
Marabtaa inaad wax ka ogaato ogolaanshaha iyo galmada? Goormaa 'Maya' loola jeedaa 'MAYA!' Ku hel 'Koob shaah ah'(nooc nadiif ah, Waqtiga socda 2:50).
Ma rabtaa inaad aragto dheeraad ah?
Meel fiican oo la fiiriyo waa 'Yourbrainonporn.com'halkaasoo Gary Wilson uu ku soo ururiyey xiriiro aad u fiican oo fiidiyowyo waxtar leh oo ku saabsan sayniska maandooriyaha.